Apple Music inogadzirisazve neBlack uye White UI, rwiyo rwiyo, uye mienzaniso mikuru? | Ndinobva mac
Apple Music inogadzirisazve neBlack uye White UI, rwiyo rwiyo, uye mienzaniso mikuru?
Jesu Arjona Montalvo | | Apple Music, Noticias, Rumo
Apple Music Izvo hazvina kumbovapo kwenguva refu pane yedu iDevices parizvino, asi mishumo inoratidza kuti Apple iri kugadzirira kuchichinja nenzira hombe. Uye zvizhinji zveizvi shanduko zvichauya mu mushandisi interface (UI). Sekureva kweshumo nyowani kubva ku '9to5Mac' ine masosi padyo nechibvumirano, zvakanzi Apple inotarisirwa kuita shanduko huru kune iyo 'Yepasi Pose Vagadziri Musangano'gore rino, rinove riri pakati paJune, uye Apple inoronga kuvhura Apple Music inogadziriswazve imwe nguva kudonha uku.
Zvinoenderana neshumo iyo ichiri runyerekupe, Apple yanga ichishanda pane ino nyowani Apple Music dhizaini kubva kupera kwegore rapfuura. Shanduko idzi dzinoitirwa mushandisi interface, nemushumo unoratidza kuti Apple inoda kubva kure chena uye semi-yakajeka dhizaini isu tine izvozvi, uye chinja kune zvimwe nhema ne chena. Kubatsira iyo isina kugadzikana skrini, iyo semuenzaniso inoshandiswa pane iyo iPhone kana iri muhusiku mode.
Iyo nyowani dhizaini inobatsirawo kusimudzira kugona kwe share nziyo, uye zvinonzi kushandiswa kwe 3D Touch ichabatanidzwa. Mhando yemavara 'San Francisco'Apple ichave yakanyatsobatanidzwa muApple Music mune dhizaini nyowani. Pamusoro pekubatanidza kugona kwekubatanidza nziyo dzerwiyo.
Nepo ruzhinji rweApple mimhanzi sevhisi ichagadzirwazve, zvizhinji zvacho zviri pane izvo zvaunoda, zvinoti kurudziro yenziyo, maalbum, maartist, uye mavhidhiyo emimhanzi. Ichi chikamu chicharerutsa nekusimudzira zvirinani kuwedzera kushandiswa kweiri basa. Nepo iyo interface ichichinja, mashandiro acho anoshandisa algorithms akafanana neinokurudzira injini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple Music inogadzirisazve neBlack uye White UI, rwiyo rwiyo, uye mienzaniso mikuru?
Netflix inoita kuti ugadzirise mhando yevhidhiyo uye nekudzora data pa iPhone
Kunyanya kudzivirirwa kweMacBook yako neTech21 Impact Snap Case